ပုံမှန်ပုံမှန် Post-covid ဘဝကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ
ကျွမ်းကျင်သူများကအများပြည်သူသို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာဖို့ခြိမ်းခြောက်မှုအနည်းငယ်ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်းအပြင်ထွက်သွားနိုင်သည် ပျော်ရွှင်မှုနှင့်မျှော်လင့်ချက်။ Hinterhaus Productions /
ကျွမ်းကျင်သူများကအချို့လူများသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါကျဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှသာမန်ဘဝသို့ပြောင်းလဲရန်ခက်ခဲကြောင်းအချို့ကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားသည်။
လူတွေကလူထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာပေါင်းသင်းခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ သူတို့တရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသင့်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ကို quarantine မှာထိုင်ပြီးငါတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဘဝဘ ၀ အတွေ့အကြုံတွေကိုဘယ်အချိန်မှာစပြီးဝင်မယ်ဆိုတာအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။
အိုး၊ လွတ်လပ်မှုရဲ့အရသာကချိုမြိန်နေလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့အဲဒီအချိန်တုန်းကငါတို့အားလုံးကိုနမ်းကြလိမ့်မယ်င။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပွင့်လင်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အစတွင်ရှိနေသည်။ ဘောလုံးဂိမ်းများ၊ အကန့်အသတ်ဖြင့်ပြန်လာသည့်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်မျက်နှာဖုံးများဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့သည်။
မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်တောင့်တသောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ တွန့်ဆုတ်နေသည်ဟုခံစားရသနည်း။ , "
, Md ။ မှ Annapolis ရှိ Guiding Therapy မှစိတ်ပညာရှင် LCSW-C က Healthline သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမဤသို့ပြောခဲ့သည် -“ လူတွေဟာအလေ့အကျင့်တွေ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာမရှိတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်သဘာဝကအရာတစ်ခုခုကငါတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်။ "
တစ်ချို့လူတွေကဘဝကိုအပြည့်အဝမြန်မြန်ပြန်သွားနိုင်ပြီ အခြားသူများသည်ရုပ်ရှင်ရုံ၌ထိုင်။ မျက်နှာဖုံးမပါဘဲစတိုးဆိုင်သို့လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ လူစည်ကားသောလေယာဉ်ပေါ်၌ပျံသန်းခြင်းနှင့်လမ်းပေါ်ရှိသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်ဝင်ဆန့်ခြင်းစသည်တို့မှအရာအားလုံးနှင့်ရုန်းကန်နေရသည်။ "ငါဟာ Extrvert မွေးဖွားခဲ့တယ်၊ အမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်" ဟုမက်ဆာချူးဆက်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအထူးကု Eileen Mell က Healthline သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ "အခုတော့ကျွန်တော်ဟာထူးဆန်းနေပြီး extrovert ဖြစ်ခြင်းအပေါ်အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီ။
"ငါတို့အားလုံးရဲ့လက်ရှိအားနည်းချက်ကိုပိုပြီးသတိထားမိဖို့ဖြစ်နိုင်သည်။ , "
, မက်ဆာချူးဆက်ရှိလူမှုရေး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်သော LICSW သည်နေ့စဉ်ဘ ၀ များနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများကိုကူညီခြင်းတွင်အထူးပြုသည်။ “ ငါတို့ဒီအားနည်းချက်ကိုအရင်ကတစ်ခါမှမရခဲ့ဖူးတဲ့နည်းတွေနဲ့ကြည့်ဖို့ဒီအချိန်ကအခြေအနေတွေရှိနေတယ်။ ”
Brickman ကလူတွေခံစားချက်တွေဟာကြောက်စိတ်အပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့မခံစားရရင်တောင်ကြောက်တယ် ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပါ။ ကြောက်လန့်သူမကဆိုသည်အားလုံးပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်ရောဂါစတင်ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ “ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသင့်ကို 'Alert! သတိပေး! သူမက "မလိုအပ်သောအရာ၏အကောင်းဆုံးမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
New Hampshire မှအလွတ်တန်းစာရေးဆရာ Martha Wilson ဟာသူမရဲ့သားသမီးတွေကိုနိုင်ငံတွင်းနှင်းလျှောစီးစွန့်စားမှုနဲ့စက်ဘီးစီးခြင်းတွေမှာယူဆောင်လာခဲ့တာကြာပါပြီ။ သူမသည်အခြားစွန့်စားမှုတစ်ခုအတွက်လေယာဉ်ပေါ်ခုန်ဆင်းနေသည်။
"ငါဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လို့မထင်ဘူး" ဟု Wilson ကပြောကြားခဲ့သည်။ Healthline ။ “ ငါလူတွေကအရူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေအများကြီးလုပ်တယ် (တောင်ပေါ်တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်းလို)” ။
အတိတ်ကလေယာဉ်စီးတာဟာငါ့အတွက်တောင်ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ လေယာဉ်ပေါ်တွင်ရောဂါတစ်ခုကူးစက်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ "
ယခု Wilson သည်စတင်စီစဉ်နေပြီဖြစ်သည်Ifier မိသားစုစွန့်စားမှုခရီးသွားခြင်းတွင်သူမတွင်ထပ်မံအပြစ်ပေးခံရသည့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိသည်။
"အခုငါလေယာဉ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတယ်။ " လေဆိပ်မှာဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
ပြီးတော့ခင်ဗျားသဘာဝအလျောက်ယဉ်ကျေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုမျက်စိတမှိတ်အတွင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ထပ်မံစဉ်းစားပါ။ သင်။
Shelli Black Tennessee မှအိမ်ခြံမြေသုတေသီတစ် ဦး က Healthline သို့ပြောကြားရာတွင်သူသည်အမြဲတမ်းလူရွှင်တော်ဖြစ်သော်လည်းအရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကမ္ဘာတွင်ပိုမိုအဆင်ပြေစွာဆက်ဆံနိုင်ရန်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
လေယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုရပ်တန့်သွားသည်။ သူမရဲ့အစီအစဉ်ကအပြောင်းအလဲတိုင်းကိုစဉ်းစားပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်သေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ် - လေပြေလေညှင်းနဲ့အပြိုင်အဆိုင်များလေပြေလေညှင်းနဲ့မတူပဲ။ Litchfield ပြောတာကသူမအတွက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
"ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသောခံစားချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်" ဟု Litchfield ကဆိုသည်။
အလားတူပင်သူမက ဟုပြောသည်၊ နယ်နမိတ်များသတ်မှတ်ခြင်းသည်သင့်အားအဆင်ပြေစေမည့် (မျက်နှာဖုံး ၀ တ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့) နှင့်အခြားသူများအားသူတို့၏ရွေးချယ်မှုများအတွက်အကဲဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
For Mell သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်ကလေးနှစ်ယောက်တို့သည်အိမ်တွင်တစ် ဦး တည်းနေခြင်းသည်ပြင်ပကမ္ဘာမှအလွန်များများစားစားမရှိဘဲ၎င်းတို့၏ခိုင်မြဲသောမိသားစုနှောင်ကြိုးကိုခိုင်မြဲစေရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
"အခုဆိုရင်ငါတို့အားလုံးကအခွံထဲကထွက်လာတဲ့ကြက်တွေလိုခံစားနေကြရပြီ" ဟု Mell ကပြောသည်။ “ ကျနော်တို့ကမ္ဘာကြီးထဲကို ၀ င်လာတာနဲ့အမျှပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ချက်ချင်းဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ "
Litchfield ကထပ်မံတွန်းအားပေးတာဟာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဘေးထွက်ပစ္စည်း - မျှော်လင့်ချက်ရှိစေတယ်။ ထပ်တိုးသည်။
"ဒီအချိန်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းက (တစ်နှစ်အနမ်းမှာဒီအခိုက်အတန့်များမရှိခြင်းပြီးနောက်) ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်တန်ပေးသည်။
မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတယ် (ကပ်ရောဂါကြီးကာလအတွင်းမှာ) "Litchfield ကပြောခဲ့သည်။ “ ဒီကလေးတွေကို၊ ဒီမိသားစုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျှော်လင့်ဖို့လိုတယ်။ မျှော်လင့်ခြင်းကိုသင့်ရဲ့ ဦး ခေါင်း၌ကွင်းဆက်ကိုပြောင်းလဲပါ။ "